अमेरिकामा फेरि अस्ताए अर्को एक नेपाली युवा दिपेश ! – Dainik Sangalo
अमेरिकामा फेरि अस्ताए अर्को एक नेपाली युवा दिपेश !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन २९, २०७८ समय: १५:२६:४७
टेक्सस– टेक्ससको युलेसमा लामो समयदेखि बसोबास गदै आएका ३७ वर्षिय युवा दीपेश थापाको दुख्द निधन भएको छ ।
युलेसस्थित घरमै सुतीरहेको अवस्थामा तीन दिन अघि उनको निधन भएको हो । दाजु तथा व्यवसायी दिवश थापाले भाईकाे दुख्द निधन भएकाेमा दुख व्यक्त गरेका छन् ।
तीन दिन अघि दीपेश घरमै सुतेकाे अवस्थामा मृ,त भेटिएका थिए । उनि मधुमेह तथा उच्च रक्तचापका बिरामी रहेका थिए ।‘मैले फोनमा धेरै पटक सम्पर्क गर्दा पनि भाईकाे फाेन उठेन’ युलेसमा रहेका
दाजु दिवश थापाले भने– घर पुगेर हेर्दा पनि दिउसो अबेरसम्म ऊ सुतीरहेको थियो, उठाउन खोेजे उठेन ।’उनले भाइलाई भेटदा नाकबाट रगत बगीरहेको थियो ।
शरीर पनि हलचल नभएको देखेपछि तुरुन्तै उनले ९११ म कल गरेर प्रहरी बोलाएका थिए । प्रहरी आएपछि उनलाई मृxत घोषित गरिएको थियो ।
दीपेशको शनिवार नै ड्यालसमा अन्तेष्टि गरिएको छ । उनकाे हदयघातका कारण निधन भएकाे हुन सक्ने अनुमान गरिएकाे छ ।
पोखराको न्युरोड स्थित दरबारथोकका स्थायी बासिन्दा दीपेश २००३ मा अध्ययनका लागी अमेरिका आएका थिए । परिवारमा तीन सन्तानमा उनी कान्छा हुन ।
उनले ग्रयाजुवेट गरेर जागीर खान थालेका थिए । पाच वर्ष अघि बिहे गरेका थापाको एक श्रीमति रहेकी छिन् । उनी डिएफ डब्लु एयरपीेर्टमा ड्युटी फ्रि स्टाेरमा सुपरभाईजर थिए ।
भाई आएको तीन वर्प पछि मात्रै दाजु दिवस अमेरिका आएका थिए । भाई दीपेशको निधनमा टेक्ससमा रहेका विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाले उनको निधनमा दुख व्यक्त गरेका छन् ।
युएसनेपाल पोष्ट पनि दीपेशको निधनमा हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछ ।
त्यो हो हामी संसारको कंगालतम् देशहरु मध्यको एक देशका नागरीक हौ। कारण के हुन सक्ला? के हामी भोतिक रुपमा मात्र गरिब छौ? यी प्रश्नहरु आज हाम्रो समाजले आत्म समालोचना गर्नको लागी सोध्नु पर्ने भएकोछ। हाम्रा पहाडका नदीनालाहरु, सारा देशलाई उज्यालो पारेर, सबलाई खाना पकाई खुबाएर, घरघरमा यातायात पुगाएर, हरेक घरमा आधुनिक मशिनहरु चलाइ दिएर, भारतबाट बिदेशी मन्द्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षमताबान छन; तर हामीसंग बिजुलि निकाल्ने बिध्या छैन; हामी त्यसैले गरीब छौ।
हाम्रा हिमालहरुले हामीलाई प्रसस्त बिदेशी मुन्द्रा दिन सक्छन; तर हामीलाई पर्यटन ब्यबसायको ज्ञान छैन, बिदेशीमुन्द्रा तान्नसक्ने कला छैन; हामी त्यसैले गरिब छौ।सधै भुइचालो गैरहने
चीनमा अहिलेसम्म ८५ हजार ४५० रहेको छ भने ४ हजार ६३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालमा बितेको २४ घण्टामा थप १ हजार ३२९ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ६४ हजार ६९ पुगेको छ । यो कुल संक्रमितको ७३.७ प्रतिशत हो ।यसैबीच हालको अवस्थामा उपचाररत संक्रमितको संख्या २२ हजार २१९ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Last Updated on: October 15th, 2021 at 3:26 pm